The Leaf Residence မှ Director ကိုညီညီလတ်နှင့် အင်တာဗျူး (အပိုင်း-၂)
Car Parking နေရာမှာလည်း စုစုပေါင်း ၃၈၅စီးစာ ရှိကြောင်း ပြောပြပေး သွားပါသည်။ အခန်းအမျိုးအစား များမှာလည်း ၇မျိုးရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။အထပ်အနိမ့် အမြင့် အခန်းအကျယ်အဝန်း အပေါ်မူတည်ပြီး ငွေပေးချေပေးမှုများမှာ ၁နှစ်မှ၅နှစ်အထိရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Tower...
The Leaf Residence မှ Director ကိုညီညီလတ်နှင့် အင်တာဗျူး (အပိုင်း-၁)
The Leaf Residence ကိုအချက်၃ချက်ဖြင့် ရည်ရွယ် တည်ဆောက်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။(၁)အချက် အနေဖြင့် သင့်တော်သော ဈေးနှုန်းအနေအထားဖြင့် အဆင့်မှီမှီနေထိုင်နိုင်ခြင်း၊(၂)အချက်အနေဖြင့် တည်နေရာ အနေအထား အချက်အချာကျခြင်း၊ (၃)အချက်မှာတော့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားစွာနေ...
J.D Pool Co.,Ltd မှတာဝန်ရှိသူ ကိုညီညီသွင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (အပိုင်း-၂)
များသောအားဖြင့် ရေကူးကန်ကို နေ့တိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုးဖြစ်တယ်လို့ Feed Back တွေပြန်လာကြောင်း၊ အခုဆိုရင်တော့ သန့်ရှင်းမူ့စနစ်ဆိုတဲ့ Auto Timer ပေးထားလို့ရပါတယ်Customer များအနေနဲ့လည်း ကိုယ်အသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာ Auto Timer ပေးထားရုံဖြင့်...
J.D Pool Co.,Ltd မှတာဝန်ရှိသူ ကိုညီညီသွင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
J.D Pool Co.,Ltd သည် ရေကူးကန် တည်ဆောက်ရေးကို အဓိကထားပြီး တာဝန်ယူဆောက်ပေးနေကြောင်း သိရပါသည်။ ရေကူးကန်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းကနေ ရေကူးလို့ရပြီး ရေသန့်စင်ရေးထိပါ တာဝန်ယူပေး တည်ဆောက်ပေးကြောင်း သိရပါသည်။ ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊ပုဂံ အင်းလေး တွေမှာ...
Perfect Three Construction Co.,Ltd မှ Managing Director ကိုသက်ဇင်စိုး နှင့်အင်တာဗျုး (အပိုင်း-၂)
Perfect Three Construction Co.,Ltd အနေဖြင့် လက်ရှိ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်အနေအထားမှာ တည်ငြိမ်နေသော် လည်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပုံမှန်အ တိုင်း ဆောက်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်နေရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြောပြပေးသွားပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ...
Perfect Three Construction Co.,Ltd မှ Managing Director ကိုသက်ဇင်စိုး နှင့်အင်တာဗျုး (အပိုင်း-၁)
Perfect Three Construction အနေဖြင့် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇွန်၂၀ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။အခန်းဝယ်ယူသော Customerများအတွက် ပြီြး ပည့်စုံသော နေထိုင်မှုလေးကို ရရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကွန်ဒိုဆောက်လုပ်မှုများ...
KLEEMANM Lift & Escalator ( Family Business Group Engineering Co.,Ltd) ၏ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
ဂရိနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ KLEEMANM အမှတ်တံဆိပ် ဓါတ်လှေကားကို Family Business Group Engineering Co.,Ltd မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Sedona Hotel မှာ ပထဆုံးအနေနဲ့ မိတ်ဆက်တင်ပြ ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့ အခမ်းအနားတွင် တာဝန်ရှိသူများမှ KLEEMANM အမှတ်တံဆိပ် ဓါတ်လှေကား နှင့်ပတ်သက်၍...
Myat Tha Pyay Construction Co.,Ltd မှ Managing Director ဦးမြတ်လွင် နှင့်အင်တာဗျူး (အပိုင်း-၂)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Condominium project များ များပြားလာ သည်နှင့်အမျှ မြတ်သပြေ အနေဖြင့်လည်း Condo project ဆောက်လုပ်ရန် အစီအစဉ်များ ရှိကြောင်းသိရှိရပါ သည်။နိုင်ငံတကာမှ Constructionလုပ်ငန်းများ ပြည်တွင်း သို့ ဝင်ရောက်လာမှုများပြားလာသည့်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်...
Myat Tha Pyay Construction Co.,Ltd မှ Managing Director ဦးမြတ်လွင် နှင့်အင်တာဗျူး (အပိုင်း-၁)
Myat Tha Pyay Construction အနေဖြင့် ၂၀၀၀ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော Billion Bright CCTV Co.,Ltd ကိုတော့ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ Project ဆောက်လုပ်မှုများထက် မြေကွက်များဝယ်ယူကာလုံးချင်းတိုက်များသာ ဆောက်လုပ်မှုများကြောင်း...
Royal Htun Thitsar အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်မှ Managing Director ဦးတင်မောင် နှင့်အင်တာဗျူး
Royal Htun Thitsar အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အနေဖြင့် မန္တလေးမြို့၏မြို့သစ်ပိုင်း နှင့်မြို့ထဲပိုင်းကို အများဆုံး အကျိုးဆောင် ပေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အကျိုးဆောင်ကုမ္မဏီ အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ ချိန်မှာယခုနှစ်တွင် ၂၃နှစ်ပြည့်ပြီ...